चरक मेमोरियलका सञ्चालकले नै डाक्टर कुटे | NepalDut
पोखरामा थपिए ८६ संक्रमित, गण्डकीमा ७ हजार पुगे
चरक मेमोरियलका सञ्चालकले नै डाक्टर कुटे
- डा. ऋषिराम ढकाल कुटिए, रामचन्द्र रेग्मी १ रात हिरासतमा
पोखराको पृथ्वीचोकमा रहेको चरक मेमोरियल हस्पिटल प्रालिमा कार्यरत डा. ऋषिराम ढकाल कुटिएका छन् । अस्पतालका सेयर सदस्यहरु रामचन्द्र रेग्मीले बुधबार ढकाललाई कुटेका हुन् । ढकालको अवस्था भने सामान्य छ । ढकाल जनरल सर्जन हुन् ।
वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका डिएसपी नवीन कार्कीले डा. ऋषिरामलाई कुटेको अभियोगमा बुधबार रामचन्द्र रेग्मी, कपिल पोखरेल र डा. बद्रि पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि गरे । रामचन्द्रले कुटेको पीडितले बताएपछि कपिल र डा. बद्रिलाई भने बुधबार साँझै छाडिएको थियो ।
रामचन्द्रलाई भने बिहीबार बिहान छाडिएको छ ।संस्थाको बैठक बसी कुरा मिलाउने दुवै पक्षले प्रतिवद्धता जनाएकाले बिहीबार बिहान उनीहरुलाई छाडिएको कार्कीले नेपालदुतलाई बताए ।
पोखराको नागढुंगामा अत्याधुनिक भवन बनाइरहेको चरकमा केही महिनादेखि सञ्चालकहरुबीच विवाद छ । बुधबार पार्किङको बाहानामा डा. ढकाललाई पिटिए पनि मुख्य कारण भने अरु नै रहेको स्रोत बनाउँछ । चरकमा रामचन्द्रले फार्मेसी, कपिलले ल्याब सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
नयाँ भवनमा अस्पताल सरेपछि फार्मेसी, ल्याब, एक्सरे आदि अस्पतालले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा अस्पतालका ११ सञ्चालक छन् । रामचन्द्र, कपिल र डा. बद्रि भने अहिलेकै सञ्चालकहरुलाई ल्याब, एक्सरे, फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पक्षमा छन् । ल्याब, फार्मेसी, एक्सरे आदिबाट हुने ठूलो कमाइमा कुरा नमिल्दा यो घटना भएको हो ।
हालै भएको अस्पतालको विशेष साधारणसभामा यही विषयमा सञ्चालकहरु बिभाजित भएपछि जगन्नाथ गौतम अध्यक्ष चुनिएका थिए । यसअघि डा. बद्रि पौडेल अस्पतालका अध्यक्ष थिए ।